Somaliland “Wax aanan Filayn ayuu Noqday, Madaxwaynaha Cusub ee Puntland Siciid DENI ” [Muuqaal] | KALSHAALE
Somaliland “Wax aanan Filayn ayuu Noqday, Madaxwaynaha Cusub ee Puntland Siciid DENI ” [Muuqaal]
Jan 10, 2019 - 49 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Somaliland ayaa ka hadashay hadalkii kasoo yeedhay Madaxwaynaha Cusub ee Puntland iyadoo sheegtay inay isbadal ka filayeen Hogaanka Cusub ee Puntland.
Wasiirka Biyaha ee Somaliland Saleebaan Koorre ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay Hadalkii kasoo yeedhay Madaxwaynaha Cusub ee Siciid Deni, oo xalay sheegay in Puntland dhulkeeda lagu soo Xadgudbay.
“Hadalkii uu sheegay Siciid Deni ayay sheegeen inuu la Aragti yahay Maamulkii Hore, Dadka deegaankaasi waxay u baahan yihiin Nabad iyo Nolol, inay la jaanqaadaan dadka Deriska la ah, Caqligu waa inuu shaqeeyo.”
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (49)
Kkkkkkkkkk kani isagu waxba kama qormaan waa nin laga lumay waxuu doono tolkii haka sheego hayeshe malmahan rer xamarka iyo rer hargeysa waxey kufanayeen qolaba iney iyadu wadato arinkas wanla yabay hiraa loo dhahay nin mj ah marabi manoqdo kkkkkkkkkk Waxan dhahaa war iska eegii kii aad aragtanba kan kala kadaran matna waxeyku hayaan Aabe gaas ayaa roonaa waxan ad uga helay ingiriis hadan noqoten anagu talyini noqon mayno dalkana wa somalia somali ayaa leh kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Odey dabshid awey yaa qoraal dher o bilaa nuxur ah kudalay nin ayan kensanay o xamar laga xukumo doraad waxan kugu dhahay khiyaliga iska ilow meshan Puntland ah dhaqan iyo shacab aya utaliya ninki cadkisa dhacsan karin malin cad ayey daqada kala baxaan hada waad ogaatay gaas inuuu ahaa nin nabadeed o aad uqabokw kudarsoo ninkani waa billioner maha nin baahan hhjhjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj
Horaan dadka ugu sheegnay war puntland qof baa qof badalayee mawqif isma badalo.
Gaas baa baxay ee maxaa is badeley qolada xamar baa ugu darnayd maalmahan gaas baa tuurnay ku faanayey kkkkkkkk
Waxaad igu dirirabtaa Dalxaheena Qardho,
Hantida iyo kursigaba anagaa siiney, hadduu Kibraha Qardho ayuu Qubo ka dabaa.
– Sug HAGBADAADA 2022.
@war hadal looma baahne ninkani Ma imaan karaa @tukaraq Anigu Waxaanba Ka baqayaa @in Garowe laga qaado.wbt
Deni uusbuur bedelay Caac uusbuur dhul miyaa lagu soo celin lagaa?kkkkk
Waxaa dhaba in ciidan beeleedkii Tukaraq lahaa baan xoraynaynaa, inay badidood shalay ku laabteen tuulooyinkii ay kasoo kicitimeen.
Markay dhamaysteen xoolihii Dhulbahante.kkkk
Ina koore isaga wuxuu u jawaba ninkii harti ah kkk
Maamulka hargaysa weli miyusan ka korin qabyalad
Deni wuxuu ku shaqynaya rabitanka puntland iyo
Federalka somaliyed wuxuu kaloo aminsan yahay
Dowlad somaliyed oo sal adag inay ka shaqyso
Somalia ninkani waa ciyalkii ku koray casimadii
Muqdisho oo ay ka jirtay dowladii kacanka
Yaab com.Oo maxay filayeen?
Shalay soo taay ay salaan iyo hambalyo u dirayeen.Maxaa maanta dhacay?
Siyaasadii Diqsiga miyaa meel u soconaysa kk
Marka la soo mirqaamo ee laga soo kaco fuckingstreetka ayaa la baraarugayaa.
Marka la qaadiysan yahayna hambalyo ayaa layska dirayaa .
ADIKU WAXAAD TAHAY WASIIRKA BIYAHA EE MAXAAD KAHADLAYSAA AWAY DADKII SHAQADAAN LEHAA MAXAAD MUUSE BIIXI U ODHANWAYDAY SHADAAN I SII HADII AAD NAFLEEDAHAY SHAQADAAN WAXAA ISKA LEH WASIIRKA WARFAAFINTA DOQONYAHAY MADAXA WEYN
yaab horta keleb cali kore jabhada SNM ma wuxu u yahay
wasiirka warfaafinta mise waa wasiirka biyolayaasha
ilaa hadu qofku yahay bila xishood mayaqaan
mowqifka u kahadlayo subaxaanaka yacadiim
Hadaad afkaaga uraya haysan weydo ina Koore lee yarta kaa yar u tu, inaynaan!
Dhash lee markuu kaga siiyo lee xishoon!
Xagee lagu arkay dawlad afhayeenkeedu yahay wasiirka biyaha away kii afhayeenka ahaa.
Hadhow bay ku dhihi waa dimuqraadi.
Sida la isu xigo ayaa la isugu jawaabaa.
Wasiirro iyo boolis qayila waan ku ogaa meesha.
Indhaha ayaa la marmaranayaa cideecadana waa la soo istaagayaa! Qaaq…qaaq……
Dhaqan xumida ay soomaali bareen baa ka daran wax kasta.
Waagii baryaba qofba qof ayuu u jawaabayaa.
Halkaan in badan baad kusoo qoraysay Cali Ciise ayaa Puntland madaxweyne ka noqonaya!
Bal kawaran bahdilaadii lagu sameeyay intaad ina Koore caayayso!
khaatumo haanoolaatoo iyo Kalahaya,
Puntland qaxooti baad ku tihiin sida falastiin-ta kaamka Shatila ee Beiroet duleedkeeda saaran!
Dhabayaco dhulkeeda maxaa ugu haystaan, hadaa idinku dhulkiinii ka qaxdeen? Waa gardaro!kkk
Kusoo laabta dhulkiina hooyo, wax la qaybsada, madax ka noqda!
Hadii kale waxaad ahaan’Hasha labada geed jecel, midna gaadhi weydee, waraabuhu…….
Aar naga aamusa wejigiin gubaye. 16 toban nin oo dhulbahante ah baa garoowe ka codeenayay ma jiro mid Cali Ciise codsiiyay!
U tudh shacabkaagaa sukdaan, Mr Baakhad & Kahtuumo Hanonaalataba miyaadan ogayn inay shacabkaagii yahiin hoos joogay calanka Tawxiidka leh?!
LA saa’ir markaasaa sxb, inaagama mudna intaan dhulkoogi ka qaadnay hadana u hanjabnee…hayska keen caayaanee udaa sxb sifiican maylasocotaa suldaan!
Inaadeer mr Baakhad waan kuu hubaa inaanu Samaroon ahayn. Waa saqajaan/fule wala weyna oo iska dhiga inuu reer Boorame yahay.
Balan-na waan ku qaadayaa, inaan sidii Barawaani queen maqaxidaan uga caydhiyay, mr Baakhad-na uga caydhiyo!
Cidna igama celin karto walaa adiga walaa cid kale!:-(
Naa naab kaan Kahtuumo Hanonaalato isaga waa kugu raacsanahay waa u tudhaa, uma jawaabo inta badan. Hadana farahaan ka qaadayaa!
10 sano ka hor ayaan iri, markii Laascaanood, askar Ina Cambaashe watay oo Xaabsade sida Ina Koore siyaasadda u hogaaminay oo wiilal Cumar Maxamud u badan hiilo yimid lagu laayey…run
Waxaan iri Dhabayaco ma afgarayso Dhulbahante, waayo walaalkiiis ka yar oo wax la leh ayuu u arkaa, Dhulbahantana walaal iyo dad jira midna uma arkaan….
Majeerteen marka Isaaq, Hawiye iyo Somali kale maqlaan in meesha soo gaaleen, xag siyaasad ama colaad way ogyihiin in cadow adag horfadhiyo…
Laakiin Dhuloos baa oran;; ma naagihii Dhabayaco ayaa laga baqayaa??? Kkkkkkkk
Waayo weligood xabad Dhacayaco oo cadownimo usoo dagaal galay ma arag!!
Weligood ma arag colaad ka badan aano qabiil beeleed….
Hadda daanyeerkaan Koore waxay Iidoorka cabsida hurdi la, isagasoo hormariyeen, waa asaga in cabsi ka qabin oo Puntland shacab Dhulbahante colaad iyo xasuuq midna u rabin..
Waa daanyeer jaad loo qaaday…!
Ilaa Dhabayaco daanyeerta Dhulbahante madaxa jabiyaan Garoowe qatar ayey ku jirtaa..
Isaaqii baa ka jooga ku haya, ayagiina waxay leeyihiin war soo socda, Dhabayacayo anaga naqaan oo Garoowe xitaa ka cayrine.
Iidoor waa ogyihiin in jiri doonto maalin orayn Puntland shacab Dhulbahante ayaa ku baabi’in oo maraqa la isacabin, inta neefkii kuu karsamayey lagugu kordilo.
Daanyeer Afweyn Ina Koore.
Iidoor iyo Geelwas Dhulbahante halaga dhexbaxo.
Ingumeed ku dhashay Fukcingstreeka oo kolna salaan diraya maalin kadinba oohin la soo fadhiisanayaa kkkk
30 sano ayaa lagu jiraa biyao la’aan iyo Aids dadkii u dhinteen.
Shalay ayaan arkayay iyaga hambalyo u diraya Mr Saciid Deni oo sii qoslaya sidii gabadh saxiibkeed soo socdo.Maanta tanbaa ku xigtay kk
Qaadro iyo murqaan ayaa lagu jira.
Marka la soo mirqaamo hambalyo ayaa la diarayaa – marka la qaadiroodana caybaa la dirayaa.
Hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qeeyliyaa…waa heeestii NIMCO YAASIIN.
Dr cali ciise wuu tijaabiyey inuu hogaamiyo dadkisa
nasiibdaro waxa wax doranayey lix iyo lixdan oday
o kafekeraya calooshoda keliya danta dadka iyo dalka toona
aan kafekerin haduu shacabku codayn laha waxa
biyo kama dhibcaan ah inay dooran lahaayeen
cida dantoodu ku jirto amaankoda iyo dhaqaalohood
garoowe malihidin o qaxootibaad ku tihiin
midbaan kaleyahay oday siilaanyo hargaysa umadhalan
asal iyo fasantona umalaha waa habarjeclo
wuxu kasojeeda bariga burco iyo galbeedlka
gobolka sanaag sharciga u ogolaaday inuu xukumo
hargaysa o aanu u dhalan isaaq ahaan ku xukumo waad
maxa nodiidaya inaanu xukuno puntland iyo
sxb puntland anaga leh waa dadkayagi iyo deegankayagi
siyaasadu waalagu kala duwanaan kara siyaasada
siyaasadu waa sida dabaysha o kale marba meel u guurta
lkn dhaqan iyo dhalasho waa maguuran beelwaynta
harti waxay lamidtahay habarjeclo adiguba maadyeshan
halaydinka dhex kaluumaysto WBT
Beryahan waa maxay mashxarada Laalays iyo SOmalilander, Aarka Hargeysa etc. Wadaan.
Yaab, waa maxay cabsidaan?
Runtu waxay tahay inta ninkaan Ina Koore, Cabaashe, Cali Kaliif, Xaglotoosiye, Ina Maxamad Cadde iyo kulli idinkasoo horeeyaan, Dhulkooda 100% haysataan, cidna idinma soo socoto.. Laakin maalinta xabad idiin qaataan, maalintaas cabsada….inta ka horeysaysa dhul Dhabayacayo lee ha isku imaanina..
Waayo maalintaas mowka ayaa la iska adeejin, idinka iyo ayagaba!
Run🙂 Been ma sheegin.
War xira xuduudka baas aad noo sheegtaan if I care.
Maamulkan baho xabasho wuxuu la qaylyo meesha ma yaallo maxaa yeelay reer mudigiiba la aragee saa waa nin kalluun xannaarsan.kkkkk
Kooxdii reer bari ee awalba dhiibtay baa laascaanood soo celin taasi waa wax lagu qoslo.
Ninkan maamulka puntland loo doortay cadihii dhiibay (aun) ayuu egyahay wadadii ayuuna mari.
Iska dhaaf laascaanoodee waxaan sugnaaba waa maamulka Somaliland oo lagu soo dhaweeyo labada garoon ee Garoowe iyo Boosaaso.
jooji calaacalka nedel iyo naanaba adiga ah habaryahay
dhareerku kasocdo sida dadka caadiga ah fikirkaaga u dhiibo
adigon cidna caayin hadikale ilmada ceshi duli ilaa duli
YOU ARE NOTHING=ZERO!!!.
PL & SL MIDNA DAN UMA HAYAAN MASAAKIINTA SSC DEEGAANKAAS KU DHAQAN.
HADUU DENI YAHAY MADAXWEYNE MAJEERTEENIYA Ah.
ADIGUNA WAXAAD TAHAY WAZIIR USHAQEEYA MAAMULKA ISAAQ LAND.
ISIS MADE IN ISRAELI(SUICIDE PROJECT & ISRAELIAN MISSIONERY GROUPS)=ELLIOTE SHIMON GROUP.FUCK YOUR SELF,YOU ARE JEWISH NATIONALTY & MISSIONERY LEADER.ISNOT MUSLIMS,SURE.
Walaahi fulaynimada Iidoor anaa la yaabay!!
Faysal ninka dhageystay ayaa fahmin argagaxa meesha ka jira!
Xitaa social media saqiir iyo kabiir reer Somaliland waxay isha ku hayaan doorashadii Puntland.
Gabar aan deris oo Habarawal ayaa igu tiri, Moorgan uun hadduu nagu soo bixin waa qayr..
Waa qof 1990 seexahay kkkkkkkkkkl.
Muxuu Morgan awood hayaa xitaa haddii Puntland loo doorto, ma Dhuloos dhan jeexi karaa, Iidoor kudaba jiro.. Yaase in u dhintaan ogol in Sool lasoo celiyo oo dadka dhulka leh ahayn…🤔
Adiga Kuwa kula joogee kuxigeen ka budhlayn uugu horeeyaa maxay wax kuugu qaban waayeen sxb ilayn iyaba waa reer ka aad sheegaysee eed leedahay way kula socdaan oo way kaa soo horeeyaane.
kuwa adiga kula joogaa ma haweenba, sxb haday dhulmahante cid wax taraayo adba waa kula joogaan!!
Ma xasuusataan markii Tukaraq in xoreeyaan damceen oo ilaa Raascayr, Huriya, Xaafuun, Garacad iyo Galdogob ka yimaadeen…..rag Qubo lagdi jiray…kkkkkk
Markay arkeen ninka disho iyo kan ku dila waa dadkii tuulada u dhashay..kkkk..
Ma jiro cadow kusoo duulay oo adiga ahayn….kkkk
Waxaa ka dhacday Ari Boowe meesha nagakaxayya.
Run rag kama nixiso.
horta maxad laburaanbuta sidi islaan odaygedi dhintay
war islayaab o jooji calaacalka nedelyohow
caloosha wayni adigu waad tahay dadka xaga dhimirka nacas xoolo ah
Waliba idinka oo isku daarood ah bay kula joogaan oo in ka badan inta hargeysa joogtaa ay garowe tubanyahiinee waxba haku marmarsiyoon dhulmahantaa idinka socdee …dee kaalaay meeshii lagaa caydhsaday sxb oo garowee baabaa araguu dul yuururaayee soo kaxayso dhulmahanataad sheegayso.
Adiga maanta walaashaa, hooyadaa daayee, Sow maaha kuwa Xerada Xalane albaabka kayuuga u taagan inay galaan!
Intaad halkaan dal mida ku soo qorayso WAXAA LAGA YAABAA IN WALAASHAA 10 ASKARI OO BRUNDIIS/UGAANDHIIS AH ay ixageeda hore iyo ta danbe isu dalooliyaan!
Yaa u ooya!
IMISA GARAC AYAAD ABTI U TAHAY!
Ninkan Deni ah hadalkiisa yaan wax weyn lagasoo Qaadin,waayo Cisman Maxamud Kama Abaal dhacayaan Somaliland oo Magan-gelisay markii Mj iyo hartiga Kaleba isugu tageen ee Aakhiro u direen.
THAT MEANS Dhuudo Cisman Maxamud Ma’iloobin
DENI JIDKUU NOO BANAYNAYAA SIDAAN FILAYO ILAA YOOCADE.
MAXAA KA YAALA SOOL,DAGAAL HADAY NOQOTONA ISAGAA FASHIL KA RAACAYAA SIDII INAADEERKII GAAS
Ninbaa igu yiri: wax ma ogid Dhulbahante sidaan ayey ugu badisaa oo Somaliland, Puntland iyo Dowladda wax ka helaan..kkkkk
Ninkaas wuu qaldanahay, wuxuu ka hadlay shaqsiyaad waxay cunaan la siiyey, wuxuu ilaaway
1. Sharaf iyo magac, waxa wiilka gabadha ku oran.
2. Dhulka horumar la’aantiisa oo ka haray horumarkii, sida jidad, airports, sckoolada, caafimaadka, shaqo abuur, hadda waa dhul la isku faysto oo tuug la kala laaluushayo.
Dhulbahante uguma badiso in candho dhexe yihiin.
Waa in midoobaan oo sharaftooda dhacday oo Ina Koore caade qaate u hadlayo dhacsadaan.
Nin aan tiisa u istaagin, cidna kalena u istaagi mayso..
Guubabo u qaata hadalkayga, ama qurunkeena noo qariya…
DHulmahanta adiga ayuu wax kugu darsaday oo Laascaamod kugu aaminay iyagoo islahaa IDOOR ka ayay idinka celin doonaan, waxayse aanay talabada ku darsan inaad tahiin HALAMASH NAAGEED marka xabada ISAAQA maqlaan horay kasii alaabtoodaa!!
Walaahi waxaan kuu qiray inaad tahay, qof wax bartay siyaasadana u dhuun daloola.kkk
Deni Su, aal ayaa BBC weydiisay, Jawaabtiisuna waxay ahayd dhegta taageerayaa-shiisa maqashii waxay rabaan inay maqlaan.
Su, aashu waxaa weeye fecil dagaal diyaar maw yahay Deni?
Jawaabtu waa maya!
Ma samayn karaa oo ma haystaa ciidan uu maamulo?
Qabta maqashii waxna haw qaban!
Hey Baakhad aka bahal,
Durba miyaad khajisay! Nacalaa adiga iyo wixii futada kaa soo tuurayba ku yaal!
Sida raga hadaad u doodi weydo waa balan inaan MEESHAN sidii BARAWAANI QUEEN dirac adoo sita ka huleeesho!
Keleb keleb dhalay!
Waad Fahansantahay Arimaha ee Inaadeer Please Ha Ku fogaan Somalilanderka,lkn All faqashiya waad buufin kartaa.
WAAR MASAAKIINTA SOMALILANDERKA AH EE KU KHALDAMAY XAMAR AMABA GAROOWE XILALKA KA DOONTAY EE DHUUNI RAACA AH ARINKOODU WAA ISKA GABAABSI OO MAALINTA SOMALIA GAADHO HANAAN SHACABKU CODKOODA KAGA SOO DOORTAAN DEEGAANADOODA CIDII METELI LAHAYD XAGAA LOOGA CODAYNAYAA
WAA UUN LAYSKA SOO ERYAYAA.
Waxaad tiri adigaba Dhulbahante waa kula joogaan ee maad xoraysid….kkkkkkk
Meesha shaqsiyaad lagama hadlayo, waa yaa degaanka jooga, shacabka, xoolo dhaqatada, ardayda, dumarka, caruurta tuulo walba.
Waa adiga oo yiraada may Daroodka Xamar jooga wax xoreeyaan ama Hartiga Hargeysa jooga.
Siyaad Bare ayaa markii shacabka kacay joojin waayey.
Awoodu waa ninka dhulka jooga maaha nin gobol kale ku maqan.
Hartiga siyaasadda waad uga adagtihiin, marka noqoto gobolada Waqooyi sidii laga yeeli lahaa.
Zaki & Somalilander
Ilmaadeera-yaal waxaan ku dadaalaa walaahi qof kasta oo Somaalilander ah inaan ehel ka dhigto, la sheekaysto, soo jiito nolasha dhabta ah! Meeshan in badan baan ku jiray, Dhulbahante layguma hor caayo, Samaroon sidoo kale.
Laakiin dameerkaan Xerada Xalane ku hoos nool hadana caadada ka dhigtay cayda Somaliland ii daaya aniga!
mr bahal aka indha xabajo maaha Samaroon! Xerada Xalane agteeda ayuu ku nool yahay/dhashay!
Taas waa been, Dhulbahante aduu wax kugu darsay ee maxaad dhulka u dicaafi wayday??
Cumar Maxamud Galkacyo hadday Galmudug raacaan, walaan Ciise Maxamuud Garoowe ka yimid xorayn karin.
Weligood dhulbaa maqan oo xorayn ku hayn ilaa Cumar Maxamuud xabadda ka jeediyo.😏
Safar badan ku jiraa nabaday.
Yaan been la isku sheegin iyo dhulbaan xoog ku haystaa!!
Hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qqeeyliyaa..war shacabkaaga u tudh sukdaan, soow inaga yaaci mayaan hadaad inta dhulkoogii xoog kaga qaaday, halkana ku cabdhinayaa!?
Safar salami sxb..Bon Vogaye…laakiin yaan lagaa maqlin dhulbahanta ayaa idin la socda hadaad IDOOR tahiiin oo dhulka dastuurgayaga budhlayn wuxu dhigahayaa inaan dhulka maqan la xorayn!!
Kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkk
Hees baa waxa Ku jirtay Mus la iiguma dhuuntee maxaan kuula ekaaday
Ciyaala Faqash Isuma keen Qarin karaan.
Waa sidaad u sheegtay ee Weerarku Waa Wixii Garoowe Ka Bilaabma Not Dhexdeena.
Jimce wanagsan.Idoorow Bahal iyo Khatumo mawaxdku haysatan runta ay shegeen maxa aflagadada kenay hadey dhaheen mamulkas nama khuuseyokkkkkkkkkkkkkķkdkkkkkkkkkk Bahal faqash maha waa nin Samaroon ah wana qabiil wana sida idoorka qabil uyahay marka uma dawladeyn kadhan khiyaliga iska ilooba kkkkkkkkkkkk Waxan aad uga yaaba markad dhahdan dhulbahante aya puntland qaxooti ku ah wacad modan in dadku idinka aqli liito
Dhulbahante wax qaysiga wax walba
Wana wax miiska lagu kala qato o cidna cid kale hoos joogin
Hadey tahay xilil schoolarship mashariic iyo dhaqale kalaba wana qabilka labad e ugu ubadan Puntland .
Harti o jifi ah dhuma wagan isaaq burxo iyo hargeysa ayuu wadaga aqligas maxuu yahay ?
Dhulbahante aniguu ila dhashay wana tolkay dpuntland isgaa leh ama qayliya ama hoos u ooya kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk